जै राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी : यो दरमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य फेरी बढ्यो ! «
जै राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी : यो दरमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य फेरी बढ्यो !
प्रकाशित मिति : १ आश्विन २०७५, सोमबार १६:२२
काठमाडौ । भारतमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको भन्दै आन्दोलन भइरहेका बेला नेपालमापनि इन्धनको मुल्य बृद्धि भएको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो । निगमले सोमबार रातीदेखि लागु हुने गरि पेट्रोल, डिजल तथा मट्टितेलको मूल्य लिटरमा २ रुपैयाँ र ३ रुपैयाँ बढाएको हो।
यो मूल्य बढेपछि पेट्रोल १ सय १४ रुपैयाँ र डिजल तथा मट्टितेलको मूल्य १ सय १ रुपैयाँ पुगेको छ। इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) ले पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार निगमको घाटा १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेपछि निगमले मूल्य बढाएको हो। आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार निगमलार्इ पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ ४४ पैसा र डिजलमा ५ रुपैयाँ १२ पैसा नोक्सानी थियो।